Uyikhuphela njani iWWDC 2021 yamaphephadonga | Ndisuka mac
Ngokuchasene nazo zonke iingxaki, abafana baseCupertino babhengeze izolo umhla apho WWDC 2021, umsitho othi izakuqala nge-7 kaJuni, izophela ngomhla we-11 kwaye iya kuba, njengeyokugqibela, isiganeko esikwi-Intanethi, ukuze silibale malunga nomsitho ekucingelwa ukuba u-Apple wayecebe ukuwenza phakathi kuka-Matshi no-Epreli.
Njengesiqhelo, kwiintsuku ezimbalwa emva kokubhengezwa, abanye abayili sele behlile ukuba basebenze yenza amaphephadonga ahambelanayo xa kwenzeka. Ngeli thuba, yayingabafana abavela Ilebhu yeApple Ngubani odale imifanekiso yamaphephadonga yalo msitho kwi-Mac yethu, i-iPhone kunye nakwi-Apple Watch.
Ngexesha lomsitho omtsha, iApple izakwazisa iinguqulelo ezintsha zeMacOS, iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 kunye neewatchOS 8. Malunga Igama lenguqulelo ye-macOS eya kuphumelela iBig Sur, okwangoku ayaziwa, ke kuyakufuneka silinde iiveki ezimbalwa ukuyazi, kodwa ukubheja sele kwamkelwe.
Yonke into ibonakala ibonisa ukuba iiglasi eziyinyani ezilindelekileyo iya kuba yinyani kwesi siganeko silandelayo, nangona uninzi lwamahemuhemu lubonisa ukuba abayi kufika kwimarike kude kube ngu-2022. Ndiyathemba ukuba ngokufanayo nesiseko sokutshaja i-AirPower akwenzeki ...
Khuphela iWWDC 2021 yamaphephadonga
ukuba khuphela amaphephadonga ukuba abafana abavela kwiLebhu yeApple bayile ngokusekwe kwisibhengezo senkcazo, kufuneka sityelele oku unxibelelwano ngemali ekhoyo yeMac, iimali ezikhoyo nge Isisombululo se5K.
Ukuba sifuna ukwenza ngokwezifiso iifayile zethu ze- Apple Watch ngalo msitho sinokuwenza kule nto unxibelelwano kunye neyethu iPhone apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Uyikhuphela njani iWWDC 2021 yamaphephadonga